Owesifazane uyisidalwa somhlatshelo ngencazelo. Uhlale ehlala komunye umuntu: izingane, indoda, umndeni, ikusasa elikhanyayo ... Ucabanga kanjalo? Khona-ke nawe, lapha. Isihloko sengxoxo ngukuthi ungayeka kanjani ukuzihlanganisa nokufunda ukuthi uzithanda kanjani. Masifunde ndawonye.
Ngokungangabazeki, iningi labesifazane sithinta kakhulu imicabango yethu nsuku zonke: sikhathalela indlu kanye nemindeni, izinkinga zomsebenzi .... Kodwa masiyeke ukusebenza kwempilo yansuku zonke okwesikhashana bese ucabanga ngomkhulu, into esemqoka. Futhi into ebaluleke kunazo zonke kule mpilo yiyethu. Kungakhathaliseki ukuthi izazi-mlando zibheke kanjani esikhathini esedlule, kungakhathaliseki ukuthi yanikezwa indima, umhlaba wagcinwa, ugcine futhi uzoqhubeka ubambelela kwabesifazane.
Futhi akukhona nge-megalomania. Sitshele, ngokuthembeka, ngubani, ngaphandle kwethu, okwazi ukuzala inzalo? Ngubani, ngaphandle kwethu, okwazi ukusizondla ngokucophelela nokukhathalela zonke izihlobo eziphathisiwe kithi: umyeni, izingane, abazali asebekhulile, izilwane ezifuywayo ezinezintambo, izintombi ezingenakunyakaziswa, abaqashi abangenalutho kanye nabangaphansi kwemimoya? Lapha, yilokho!
Lokhu akusho ukuthi uthando, olulawula umhlaba - ubulili besifazane. U-Eva, ukhokho wethu, wayezithanda, futhi wasikhathaza. Amadoda, eqinisweni, ayazi lokhu okujulile phansi. Ngisho nangoma ingoma ihlabelelwa: "Awu, ngubani ozositshela ukuthi intwasahlobo ifikile, kahle, ngubani ozosiphazamisa futhi alale, ozovusa uthando ezinhliziyweni zethu, ozosivuselela emaphupheni ethu, ngubani ozosibheka ngisho kanye, ozohlanganyela nathi kanye kanye phakade? .. "Futhi kusukela engoma awukwazi ukulahla amagama.
Kodwa, ubona, ukuze uyeke ukuxubha futhi ufunde ukunikeza uthando kakhulu kangangokuthi okwanele wonke umuntu ozungezile, udinga amandla. Amandla amaningi. Futhi kumelwe siqongelele lezi zinto, singalindeli ukuthi othile uzoza asisize kulokhu. Mhlawumbe othile uzokusiza. Kodwa azikho iziqinisekiso.
Kodwa kunzima kakhulu ukuthi sikwazi ukuchitha, okungukuthi, ukunikeza amandla ethu, uthando kanye nekhono kwabanye, singenza kahle, kodwa ukuqoqa ... Futhi ikakhulukazi lesi sayensi sinikezwa abesifazane baseRussia. Ngakho-ke sikhuliswa emakhulwini eminyaka ukuthi kulula ukufaka indlu yokushisa ukuze sikhiphe ikati lakhe eliyintandokazi, bese-ke, silele ekunakekelweni okujulile, sixoxisane ngefilosofi ukuthi kuzokwenzekani kubantwana uma odokotela bengasindisi, kunalokho kusukela ekuqaleni mayelana nentengo yokuphila kwakhe. Kulula ukugijimela esitofu esingaphandle komnyango ngaphandle kokushintsha izingubo ngemuva komsebenzi ukuze ukondle izindlu ezingenakunzima ezingazange zikhathaze ngisho nokubeka amapuleti, bese kuthi kusukela eminyakeni engama-30 kuya ku-35 ubudala, zihlushwa ukucindezeleka okuqhubekayo nokucindezeleka, kunokuba kube nanye ukuchaza ukuthi ungadla uma usemsebenzini. Ngakho kulula kithi, kodwa hhayi kangcono, kubandakanya abanye.
Ngendlela, wake wafunda ngokucophelela umyalelo wokusebenzisa imaski e-oxygen ezindizeni? Ngakho-ke, kubhaliwe kumnyama nomhlophe: umama kumele aqale ukubeka imaski phezu kwakhe, bese ulondoloza ingane! Lokhu ukufunda indlela yokugcoba nokwazisa, eqinisweni, kwenza impilo ngokwayo.
Ngakho-ke umthetho wokuqala: into ebaluleke kakhulu ukuphindaphinda nsuku zonke ukuzindla kwakho esibukweni: "Ngisekhaya ngedwa!" Ngamanye amazwi, uma ungazinakekeli, funda ukuzithanda wena, cishe akunakwenzeka ngomunye umuntu. Kodwa-ke, uma umkhawulo wamandla akho uphelekile, ngubani ozokunakekela abathandekayo bakho? Ngakho-ke, ukuze uqinisekise ukuthi izingane, abazali, amadoda, intombi, kanye nozakwethu kahle, kufanele kube kuhle kuwe kuqala!
Rule ezimbili. Cishe njalo (ngaphandle kwezimo ezibucayi kakhulu) sinesikhathi sokubala ku-5 noma kuya ku-10, bese sizibuza futhi: Ingabe kunengqondo kimi ukwenza okuthile?
Isimiso sesithathu: uma ungakwenzi isinqumo, unethuba lokucabanga ngokucophelela, uthathe iphepha nopeni. I-Leaflet engxenyeni: kukholomu eyodwa oyibhala ngekholomu ukuthi kukuphi okuhle okukuthembisayo ekusetshenzisweni kwalesi sinqumo, kanti kwenye - konke kubi. Isiphetho sizocaca.
Okuhlangenwe nakho kwamanye amazwe akudingeki ngaso sonke isikhathi kutholwe. Ukuxhumana nomqondo wendabuko kuboniswa abaningi kokubili ukwaneliseka nomqondo wokuthula kwengqondo, okudingekayo phakathi kokucindezeleka kanye nezenzo zamanje. Kodwa indlela eYurophu naseMelika amantombazane afundiswa ukuba athande futhi azihloniphe ngokwawo kusuka kwabaningi, kubalulekile ngempela. Umdwebo omuhle futhi ugqoka akugcini nje ngokujabulisayo iso futhi kuthuthukisa ukunambitheka, kodwa futhi kwenza abanye badumise ingane. Futhi umkhuba wokuzwa nokwamukela ukuncoma kuyinto enhle.
Bheka abesifazane bethu: bangaki abangasabela ekuphenduleni le nkulumo: "Ubheka okuhle namhlanje!" Phendula: "Ngiyabonga, ngiyazi"? Alas. Abanye bashaya, njengokungathi babanjwe into engcolile, abanye bayathuthuka ngokushesha kangangokuthi abazange bathole ukulala ngokwanele namuhla noma bafake i-blouse engalungile. Futhi konke ngoba umama kaningi wayengasho ebuntwaneni bakhe ukuthi: "Wena ubuhle bami!" Ngokuvamile kwakukhona into efana nale: "Suka esibukweni, kusengakabonakali ukuzwakalisa!" Kodwa owesifazane kufanele azithanda yena, kuhlanganise ebusheni bakhe, kungenjalo ingozi iphezulu kakhulu isigaba esithile sibe ihhashi eliqhutshwayo.
Phela, eminyakeni engaba ngu-20 eyedlule, abesifazane baseRashiya, beya phesheya, bamangala ngokumangalisayo, bebona emakamelweni amantombazane amancane izimbiza, umlomo wezingubo ezihlanzekile, njll. Kungani? Yebo-ke, ukuze ujwayele ukuzinakekela kusukela ebusweni, futhi ungawugijimi impilo yami ngezithende ezinwele nezinwele, uthathe isisindo esiqinile! Ukuze "ungadonseli ubuso" imizuzu emihlanu phakathi kokugcoba kwehembe kumyeni wakhe nokuthunga ezinkinobho zendodana yakhe. Ingabe amadoda angaphezu kwethu, abesifazane, kufanelekile ukushiya indlu enhle?
Kodwa-ke, ebuntwaneni ngeke sibuyele, ngaphandle kokuthi inzalo yethu iyokhuliswa ngendlela ehloniphekile futhi enengqondo. Ngakho ake sifunde ukuthola imikhuba emisha.
Okokuqala, ukuze uthande futhi uzihloniphe ngokwakho, yima ngokuphuthumayo:
• Yidla isigamu-sidliwe ngumyeni nezingane, futhi ubanikeze izingcezu ezinhle kakhulu kuze kube phakade.
• Ukuqeda indlu engapheli. Ngisho noma unethuba elinjalo - kuwumsebenzi wabo.
• Ungafuni ukuthenga into edingekayo noma oyifunayo kakhulu ukuze uthabise othandekayo.
• Ukuzinikela ukulala ekhaya noma emsebenzini (ngaphandle uma kungumndeni womndeni wakho).
• Shintsha izinhlelo zakho (kuhlanganise nezomhlaba wonke, njengokuqeqeshwa, umsebenzi othakazelisayo, njll) ukujabulisa umuntu, hhayi ngempela.
• Ukuhlekisa ngawe (ngoba abantu abaseduze nathi basiphatha ngendlela esiziphatha ngayo).
• Nqaba ukunikeza usizo.
• Ukumangala nokuphikisana uma udunyiswa noma udumisa umsebenzi wakho, noma ngabe kuyini.
Kunalokho, zama ukuthola isikhathi njalo:
• Ukuphumula emva komsebenzi okungenani isigamu sehora bese ugeza ngaphambi kokuqala imisebenzi yendlu yasendlini yansuku zonke.
• Hlala phansi phambi kwesibuko futhi ukhulume ngokucabanga kwakho, kungcono ukucabange ukuthi uyathandwa.
• Okungenani kanye ngesonto ukwenza izinqubo zezitho zomzimba ekhaya noma salon.
• Funda izincwadi zakho ozithandayo noma ubuke i-movie.
• Pheka kahle izitsha ozithandayo.
• Hlangana nezintombi zakho ozithandayo noma abantu obaziyo.
• Qedela ngempelasonto njengoba kuhlelwe.
• Gqoka futhi uziphathe njengoba ukunambitheka kwakho kudinga, hhayi ukushaywa komyeni noma umkhwekazi.
Yiqiniso, okokuqala ukwenza lezi zinto kuyoba nzima. Kodwa imikhuba ibizwa kanjalo ukuthi uziphatha ngendlela entsha oyidingayo ukuze ujwayele. Ngaso sonke isikhathi into engaphakathi kwakho izamelana nomkhulelwe, zikhumbuze, kungani wanquma ukuthatha isinyathelo esinjalo? Ngoba uwedwa. Kodwa uzama ukugcina impilo yakho nokuthula kwengqondo ngenxa yabaningi. Lena umgomo ophezulu, futhi kufanele uqhubeke ulandela. Futhi-ke, thola ukuvumelana kwangaphakathi, ngoba uyeka ukuxubha futhi ufunde ukuzithanda wena.
Futhi ngaphezulu. Yonke imvelo yakho ngokujulile enhliziyweni iyaqonda ukuthi kusuka kuwe, futhi kuphela kuwe, impilo yabo eqhubekayo incike. Ngokuvamile uvakhumbuze ukuthi bazolahlekelwa, uma uhluleka. Futhi maduzane bazoqala ukuwazisa futhi bakuhloniphe.
I-Charisma: I-Congenital noma itholakele
Ungakhathazeki, ujabule: kanjani ukuthi ube ngowesifazane ojabulayo
Ngingathanda yini ingane ekhulelwe?
Isitshalo sezindlu "isithandwa somuthi"
I-potato casserole ne-ground ground
I-spaghetti enezimila nebhethoni
Izipho zothando kumthandekayo